Codka taariikhqorihii Easy: cod rikoor ka websites fudayd
> Resource > Video > Sida loo ka Shabakadaha Qor Voice Si fudud
Ma jirtaa fursad kasta oo aad rabto in aad qortid cod ka websites si fudud? By codka, waxaan uga jeednaa cod ka websites music radio ama internet. In kastoo uu dhagaysto internetka waa hab wanaagsan oo ku baabbi'iyee content cod, aad jeceshahay waxaa laga yaabaa inay iyaga u qoraan in qalabka la qaadi karo si aad u Raaxo fiican. Taasi waa sababta aad u baahan tahay oo taariikhqorihii cod sahlan tahay in la caawiyo. Streaming taariikhqorihii Audio waxaa lagula talinayaa in ay dhacdo in. Waa Qori cod via kaarka codka on your computer, si gebi ahaanba aad ka heli karto waxa aad ku maqli aan khasaaro tayo leh. Waxa kale oo fudud software duubista codka sameeya in ka badan duubo. Sidaa daraadeed, waxa kale oo aad awoodi karaa inuu wareejiyo faylasha codka la duubay si Lugood si fudud oo la sameeyo giraan codadka. Ha la iska hubi in warbixinta hoos ku qoran.
1 Ku rakib oo taariikhqorihii ahaa cod fudud
Hel barnaamijka on your computer. Ku rakib version saxda ah iyo waxa maamula. Version Suuqa ayaa inta badan looga hadli doonaa in this article.
2 Bilow duubo cod fudud
Riix badhanka Record ku software iyo ciyaaro cod ka websites. Sida ugu dhakhsaha badan dhawaaqa muuqataa kombiyuutarka, barnaamijka u Qoraynaa doonaa mar. Dhab ahaantii, waa in aad la leedahay xidhiidh wanaagsan internet inta ay socoto.
Barnaamijkan wuxuu u qoraan karaan codkooda si joogto ah. Tusaale ahaan, waxaa ku qori karta playlist dhan ku Spotify iyo file kasta oo kala by bareeg u dhexeeya.
3 Transfer in Lugood si fudud
Ka dib markii codkiisa la duubay, waxaad ka heli kartaa tab Library. Dooro files iyo guji Add badhanka Lugood in, markaas dhammaan faylasha ah waxaa laga heli karaa playlist SAR ku Lugood.
Fiiro Gaar ah: Wixii version Mac ah, waxaa jira Add ma button Lugood in. Laakiin waxaad dooran kartaa faylasha codka oo riix Control muhiim ah waqti isku mid ah si aad u hesho suuqa kala pop-up ah. Waa in aad dooratid Show in Folder uu furmo suuqa si loo helo meesha files ee ku kaydsan yihiin. Markaas dajiyaan in Lugood keligaa.
Taasi waa mid aad u fudud, soo maaha? Sidee ku saabsan samaynta ringtones ka mid ah faylasha codka? Riix icon dawan iyo dooro qayb ka mid ah in bitmap ku cad ugu hooseysa. Markaas badbaadin geliyey telefoonada aad. Waxa kale oo aad edit karaa macluumaadka ku saabsan heesaha. Xaq-riix file a in ay doortaan View Detail oo heli column ah muuqday garabka midig halka aad ku qor karaa in loo dhigo wax kasta oo aad jeceshahay. Waxay u egtahay la yaab leh, sax? Waa maxay sababta isku day in aadan software ah oo leh waxyaabo badan oo sheeegateen oo hadda? Marna la sii dayn doonaa inaad hoos.